Archive du 04-juin-2021
Governemanta Ho avy ihany koa ny “cyclone” ?
Fanapahan-kevitra sy fahasahiana lehibe ny an’ny Filoha ankehitriny sy ny ekipany nanala olona izay sokajiana ho nanana hery na “influence”
Mbola lavitra ny tolona
Nandray ny toerany sahady iny ny tale hisahana ny serasera eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika vaovao.
Ady amin’ny Covid 19 Vita vaksiny i Bodo, Princio, Samoela, Ken, Gangstabab
Tonga maro ireo mpanankato nanao vaksiny Covid-19 tety amin'ny foiben'ny UNICEF Madagascar eto Antananarivo.
Trano fandraisam-bahiny ao Toamasina Nivadika ho « maison de passe » ny ankamaroany
Nampiditra fatiantoka betsaka sy fandroahana mpiasa maro teny amin’ny sehatry ny fizahantany ny valanaretina Covid-19 ity.
Fandraisana mpampianatra mpikaroka Tsy mangarahara, ahiana ny kolikoly an-tapitrisany Ariary
Mametraka ahiahy momba ny fampidirana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra tsy raikitra na « vacataires »
Fanadinam-panjakana Nitombo 3% ireo mpiadina hiatrika ny CEPE
Nitombo 3% izany raha oharina tamin’ny taom-pianarana lasa ireo mpiadina hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE amin’ity taona ity.
Andro iraisam-pirenena ho an’ny tontolo iainana Miantso ny hanangonana tavoahangy plastika ny Kopakelatra
Mandray anjara amin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tontolo iainana ny Kopakelatra.
Ady tany eny Antanandrano Fianakaviana an-jatony no lasibatra
Nanohy ny fitokonany tetsy amin’ny tany etsy Antanandrano, kaominina Ankadikely Ilafy,